Imigca yamaphepha: Tsala kwaye ulahle i-WordPress Theming | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 12, 2011 NgeCawa, nge-19 kaJanuwari 2014 Douglas Karr
Ngelishwa, bendithetha nje kwiarhente ngale ntsasa malunga nokuxakaniseka komxholo ngaphakathi kweWindowsPress. Kubantu abafana nathi bobabini abaphuhlisi be-PHP, benze itoni yemixholo kunye neeplagi kwaye bayiqonda ngokupheleleyo i-API yeWordPress, akukubi. Ngelishwa, oko akunakufikeleleka kwezinye iinkampani nakubantu, nangona kunjalo. Okukwintsusa-kufuneka ubize umphuhlisi ngalo lonke ixesha unqwenela ukuguqula ubeko okanye umxholo unokufumana ixabiso!
Umgca we-PageLine uyayitshintsha le mveliso, IPlatformPro. Uyilo lwesiphelo sangaphambili sePlatform lusekwe kwinto entsha kraca ebizwa ngokuba amacandelo. Ngamafutshane, amacandelo ayafana neewijethi zeWordPress (tsala kwaye ulahle umxholo webar esecaleni) kuphela asebenza ngcono ekwenzeni uyilo olukhulu kunye nokusetyenziswa kweetemplate. Nazi ezinye zezizathu zokuba kutheni amacandelo emangalisa:
Amacandelo e-plug-and-Play ziingcezu zoyilo esele zenziwe ze-web, ezinokuba nzima kakhulu (umz. Isilayidi somsebenzi, ukukhangela, icarousel, njl.). Yonke ikhowudi ihlala iqulethwe kwaye ilawulwa licandelo le-API; ke yonke into oyibonayo luluhlu olulula lokutsala kunye nokwehla kunye nokukhetha.
Amacandelo oLawulo anokutshintshelwa okanye acinywe kwiphepha ngephepha-ngephepha kwaye ongeze ezabo iintlobo zeposi kunye nokukhetha. Oku kuthetha ulawulo olupheleleyo lwalo lonke iphepha kwindawo yakho.
Uphuhliso lunokwenziwa kwaye luguqulwe ngabaqulunqi kumxholo womntwana osisiseko. Oku kuthetha ukuba abaqulunqi banokongeza okanye batshintshe indawo yokutsala kunye nokuwisa ngemizuzwana.
Amacandelo alula ongeze umda we-html esemgangathweni kunye neehuku zokuziphatha (zokwandisa ukusebenza). Oku kunciphisa ikhowudi eninzi ngelixa kukunika ukusebenza ngakumbi ngaxeshanye.
Iimpawu ezingakumbi Uya kuzithanda
Uyilo loMakhi Phezulu kwicandelo elitsha lokutsala kunye nokwehla, iPlatform ikwanakho nokwakha ubume bokutsalela ubungakanani besiza sakho. Unokukhetha ububanzi besiza esitsha, okanye uqwalasele nganye yeendawo ezi-5 ezahlukeneyo zebarbar esecaleni; emva koko ukhethe ubeko kwiphepha elikwiphepha.
bbPress kunye neBuddyPress -Iplatform ikwaxhasa ukudityaniswa neBuddyPress kwaye inomxholo we-bbPress weqonga lomxholo (uhlelo lomphuhlisi). Umdibaniso awunamthungo kwaye unika abasebenzisi bePlatform ubuchwephesha obunamandla nobukho obunamandla.
Ububanzi obugcweleyo kunye neeMowudi eziBanzi eziLungisiweyo -I-PageLine ikwanika ingxelo ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Zimbini iindlela zokwakha indawo yakho ngeQonga. Imowudi yobubanzi obugcweleyo ikuvumela ukuba ubenendawo yobubanzi obugcweleyo (njengemifanekiso engemvelaphi), kunye nemowudi ebanzi esisigxina ikunika umxholo wobubanzi obungagungqiyo kunye nezinto zangasemva.
Umxholo womntwana osisiseko -Umxholo womntwana osisiseko wakhiwa ukukunceda ukuba ulungiselele iqonga ngokulula kunye neendlela ezilungileyo zokwakha iwebhusayithi. Yisebenzise ukuphosa kuyilo oluthile lweCSS, okanye usebenzise 'iihuku' ukongeza ikhowudi enjenge-HTML okanye i-PHP kwiindawo kwiindawo zonke. Bazakhele ngendlela elula yokongeza amacandelo akho esiko!
namaxabiso -Iindleko zephepha-mvume elilodwa liya kuxabisa i-95 yeedola. Iphepha-mvume lokusetyenziswa okuninzi liya kuthengiswa nge- $ 175, ekwabandakanya ukungqinelana neqonga le-bbPress, imizobo kunye namakhonkco asuswe.
tags: ukukhutshwa kwedathaumphenduli we-imeyileUjoliso lwe-geoIiVidiyo zeNtengisoiselfowuni yamajelo amaninzi
I-EyeTrackShop: UkuKhangelwa kwamehlo ngeWebhu yeWebhu
Meyi 12, 2011 kwi-8: 29 PM
Iqonga sisixhobo esihle sokuphuhlisa kwiWordPress! Aba bafana benza umsebenzi wokubulala ngokwenza ukuba isoftware yabo isebenziseke lula kwaye kubandakanya neempawu ezininzi kunokuba ungangcangcazelisa intonga enkulu e 🙂
Qhubeleka nomsebenzi omhle. Awunakulinda ukubona okulandelayo!
Meyi 13, 2011 kwi-12: 59 AM
Uphononongo olukhulu uDoug! Ndabaleka ndaya ngaphesheya kwePaltformPro kwiveki ephelileyo ngelixa ndifunda i-nettuts + blog kwaye ndazibuza ukuba ingaba ilungile na loo mxholo. Kubonakala kukuhle ukuba yinyani, kodwa ndonwabile ukubona ukuba inokwenza ntoni. Ingatshintsha ngokulula indlela endiyila ngayo iisayithi kwaye kubonakala ngathi inokundongela ixesha elininzi.
Enkosi ngale voti yokuzithemba!
Meyi 15, 2011 kwi-4: 40 AM
Inqaku elihle uDoug, ndithenge le ndawo ye-buddypress endiyenzayo. Ndinomfana wam woyilo waphesheya osebenza kuyo ngoku. Ndijonge phambili ekubeni yenziwe
molo ndinombuzo: ngaba kunokwenzeka ukubeka imenyu eyongezelelweyo kunye nelayini yephepha, phezulu kunye nemenyu yasekhohlo kwaye ubeke umgaqo-nkqubo wabucala en ikhonkco lokuzikhupha kwi-footer? kuba ukwenza oku nge-wordpress kunzima kakhulu.
Sawubona uPerla- ngaba uthetha ngeePageline okanye ngomxholo oqhelekileyo weWindowsPress? Ngomxholo weWordPress, kulula kakhulu ukongeza enye imenyu kunye nengxelo yeenyawo kodwa kuya kufuneka ufumane umntu onokuthi enze ukuhlela kumxholo wakho kwaye uyazi indlela yakhe ejikeleze iWindowsPress. Kukho itoni yabantu phaya abayenzayo, nangona kunjalo. Ndingakhangela 'umyili wegama' kwindawo yakho kuGoogle kwaye ndibone into oyifumanayo!
molo ndinombuzo: ngaba kunokwenzeka ukubeka imenyu eyongezelelweyo ngephepha
umgca, imenyu ephezulu kunye nekhohlo kwaye ubeke umgaqo-nkqubo wabucala en Isikhanyeli
ikhonkco onyaweni? kuba ukwenza oku nge-wordpress kunzima kakhulu
. Ndithetha ngemigca yamaphepha
Ndithetha ngemigca yamaphepha
Ungongeza indawo ye-html kwi-footer apho ungongeza khona olo lwazi. Andiqinisekanga malunga nemenyu yesibini, nangona kunjalo. Oko kunokufuna umsebenzi othile!